IMTJIBS IFUMANA IIPOTI NGAPHAMBI KOKWENZEKA NE-AGITO | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Okufumaneka » IMTJIBS IFUMANA IIPOTI NGAPHAMBI KOKWENZEKA NE-AGITO
Inkampani yenkxaso yekhamera esekwe eFort Lauderdale ilawula ukuhanjiswa kwezentlalo kunye nobugcisa ngesitayile
Phantse iminyaka emibini, uMichael Taylor, umnini we-MTJIBS- inkampani yaseFort Lauderdale, eFlorida yenkxaso yekhamera, ebefuna ukwandisa iarhente yezisombululo abanokuzinika abathengi babo. Kodwa ngelo xesha, akazange akwazi fumana inkqubo efanelekileyo yokutyala imali eya kuthi ihambelane neemfuno eziphezulu zeshishini. Emva koko wabona inkqubo yeModyuli engenakwenzeka ye-AGITO modular.
"Ndifuna nje idoli esebenzayo eyayinokuthenjwa kuseto lomboniso," ucacisile uTaylor. “Emva koko ndabona i-AGITO isebenza kwaye ndachukumiseka ngokwenene. I-AGITO ihambise ukungaguquguquki kokubini ngaphakathi nangaphandle komkhondo - inokwenza yonke into ekufuneka siyenzile nangaphezulu… ngaphandle kwentambo. Ke siyifumene. ”
I-AGITO yimodyuli yokuqala yehlabathi kude dolly. The I-AGITO inezinto ezininzi ezenziwayo, ezivumela ukushukuma okugudileyo ukusuka kancinci, ngokuthe ngqo intshukumo yedolly ekusebenzeni ngesantya esiphezulu, konke kusisombululo esinye esinokuphatheka. Ngotshintsho olulula kakhulu nolukhawulezayo lokuphela kweedrive, i-AGITO inokuqwalaselwa isebenze ngokukhululekileyo ekuzuleni kwimowudi yezemidlalo, okanye intshukumo echanekileyo kwimizila yeTrax. UTaylor ekugqibeleni wayifumana inkqubo egqibeleleyo ye-AGITO, ebonelela ngokusetyenziswa koololiwe ngokwesiko kunye nokusetyenziswa kweendlela ezininzi, kunye ne-AGITO Tower enika inkqubo ye-700mm yokuphakamisa.
"Ewe, kwakamsinya nje ukuba sifumane i-AGITO, ukuvalwa kobhubhane kwaqala, kodwa oko kwaphelela ekubeni kulunge kuthi njengoko le nkqubo ingenazingcingo kwaye ibonelela ngentlalo ekuyileni," utshilo uTaylor. Siye saqonda ukuba siyithengile ngokugqibeleleyo. Kunye noXavier Mercado, ingcali yokuhamba kwekhamera ye-MTJIBS kunye nomqhubi, inkampani yaqala ukukhuthaza inkqubo.
Umsebenzi wokuqala wenkqubo entsha ye-AGITO yemodyuli ye-AGITO iya kuba ye-NASA kunye nokumiliselwa kwe-SpaceX Crew Dragon Demo-30 ngoMeyi-uvavanyo lokuqala lwenqwelomoya yesiphekepheke seCrew Dragon kunye nenqwelomoya yokuqala yokubhabha e-United States ukusukela okokugqibela Umsebenzi weSpace Shuttle mission, STS-2, ngo-135. Umsebenzi weza ngokudluliselwa kwiMotion Impossible emva kokuba inkampani iqhakamshelwe yiNASA, njengoko iMTJIBS ikumgama nje oziikhilomitha ezingama-2011 ukusuka eKennedy Space Centre. I-MTJIBS iya kuba noxanduva lokuthabatha umzuzu wesiko labasebenzi abangena kwizithuthi zabo emva kokuphuma kwi-Neil Armstrong Operations kunye ne-Checkout Building (eyayisakwaziwa njenge-Manned Spacecraft Operations Building) kunye nemifanekiso. Ukuphuma kunye nokungena kwizithuthi zothutho kukudubula okwaziwayo kwihlabathi liphela, ukujikeleza iGemini, Apollo, Skylab, kunye neSpace Shuttle eras. Kodwa ngeli xesha, i-NASA ifuna ukwenza into enamandla ngakumbi kunepaneli yekhamera eqhelekileyo.
(Ifoto inokubonwa apha www.youtube.com/watch?v=vAtCOwgSiEo)
NgokukaMercado, inkqubo ye-AGITO yayiyeyona ndawo ikhawulezayo yezixhobo zabo zokwakha. Indibano yedrive iphela, inqaba, kunye neentambo zonke bezikhawuleza kakhulu. Inkqubo yokulawula ngaphandle kwamacingo isebenze kakuhle kwaye yomelele ngalo lonke ixesha. ” Nangona i-AGITO inokuqhutywa ngumntu omnye, bobabini uTaylor noMercado basebenze ngenkqubo noTaylor eqhuba intloko yentloko yekhamera kunye noMercado ephethe i-AGITO. "Ngabantu ababini, ukusebenza kuhamba kakuhle kakhulu, kodwa i-AGITO ithe tyaba xa iqhutywa ngumntu omnye esebenzisa iinyawo," utshilo uMercado.
Iminyhadala elandelayo yeMTJIBS iya kuba ziinkqubo ezahlukeneyo zokuwonga. Ngelixa inkampani ibibonelela ngeenkonzo zeTelemundo kunye neUkungavisisani phantse iminyaka engama-20, inkqubo nganye ifuna iMTJIBS ibonelele ngesindululo seenkonzo zabo njengabavelisi bahlala befuna iindlela zokuyila zokubonisa.
Oku kubandakanya Amabhaso eBillboard Latin Music 2020 yeTelemundo kunye Amabhaso ama-21 eeLatin GRAMMY® Awards kwaye I-Premios Juventud (Amabhaso oLutsha) 2020 yeYunivision.
"I-Premios Juventud sibe nempumelelo enkulu njengoko besilumkile i-AGITO ne-SHOTOVER G1 ye-gimbal ezinzileyo, ”utshilo uTaylor. “Kodwa i-AGITO iyodwa izinzile ngakumbi kunezinye iinkqubo, nangaphandle kwentloko ezinzileyo. Abalawuli bayithanda kakhulu i-AGITO njengoko ibanika isixa esikhulu sokuguquguquka kuyilo oludityanisiweyo kunye nokuhamba kude ekuhlaleni. Omnye umlawuli wade wayichaza le nkqubo 'njengenkwenkwezi yomboniso' njengoko yayisetyenziswa njengeyona khamera iphambili, kwaye kwakonwabisa kakhulu ukuyiva. ”
"Abalawuli bafumana ubuchule ngakumbi ngokhuseleko lwe-COVID-19," utshilo uMercado. "Zonke iiseti ezintsha ziyilelwe ukukhusela italente kunye namagcisa, kodwa kusafuneka ibe ngumboniso onomdla kwaye onamandla."
Kwimveliso yeTelemundo Amabhaso eBillboard Latin Music 2020, Iseti yayilelwe ngamanqanaba amane kwifomathi ye arene, kunye nombonisi embindini wamanqanaba, ngokweMercado. “I-AGITO yayiwufanelekile lo msebenzi uyile setyhula. Inokuba negalelo lokudutyulwa kwinqanaba ngalinye kwaye ijike iye ngaphakathi kumbonisi ngalo lonke ixesha igcina umgama womzimba. Ibe negalelo elikhulu kwezokhuseleko nakwimpumelelo yomboniso. ”
"Xa abanini be-AGITO bephumelele, siyaphumelela," utshilo uRob Drewett, u-CEO kunye noMsunguli we-Motion Impossible. Ukwazi ukuthumela i-MTJIBS kwi-NASA kunye nokubona indlela abayisebenzise ngayo i-AGITO ukunceda abenzi bokuyila ngakumbi yile nto sayila inkqubo. Imxinwa kwaye imfutshane kunedoli yesintu kwaye ihambisa iintshukumo obungazange wakwazi ukuzenza ngaphambili. ”
Kutshanje, i-MTJIBS ibone i-xR-eyongezelelweyo eyinyani, indibaniselwano yeNyaniso kunye neMixed Reality- umsebenzi wokuvelisa umculo.
UTaylor akaboni mveliso ibuyela kwiindlela zangaphambi kobhubhane. “Sifunde ubuchule obutsha ngetekhnoloji entsha. Sesinye sezizathu zokuba sithenge i-AGITO kwasekuqaleni. Yonke into izakuhamba ngoluhlobo kwaye sililungiselele ikamva. ”
"Siyayithanda into egcinelwe i-AGITO," utshilo uMercado. Ukunyakaza akunakwenzeka kuhlala kuphuhlisa itekhnoloji entsha yexesha elizayo. Kwaye thina, i-AGITO iyanceda ukukhulisa inkampani yethu kwaye ivule iimarike ezintsha. ”
Previous: I-Semina yokuPhicotha ukuPhicotha ukuLungelelanisa iMfundo yoMculo ye-COVID kunye noDante ngexesha le-NAMM 2021
next: IGoldcrest Post yongeza uMlobi wamaGqala uAlex Berman